Sidee ayey cirbixiyeennada Muslimiinta ah ugu tukan karaan hawada sare? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaSidee ayey cirbixiyeennada Muslimiinta ah ugu tukan karaan hawada sare?
Sidee ayey cirbixiyeennada Muslimiinta ah ugu tukan karaan hawada sare?
Hazzaa Al Mansoori wuxuu sameyn doonaa taariikh ah in uu noqdo qofkii ugu horreeyay ee Imaaraatka u dhashay ee gaara saldhigga hawada sare.
Waa 35 sano jir, wuxuu ahaa duuliye hore, wuxuuna ka hawlgeli doonaa Saldhigga Caalamiga ee hawada sare (ISS), isbuucan. Waxaa laga dhex xushay kumannaan qof oo codsatay shaqadaas.
Cirbixiyeennada ku sugan halkaas waxay hawadu la wareegtaa 90 daqiiqo oo kasta. Taas micneheedu wuxuu yahay in 16 jeer ay qoraxda u dhacdo una soo baxdo 24-kii saacba.
Haddaba, cirbixiyeenkan Imaaraatka u dhashay, waa Muslim, waana inuu shan goor tukado maalintii. Haddaba siduu ku ogaanayaa qiblada dhanka ay ka jirto?
Marka la saaran yahay Xarun dhulka ku wareegeysa 27,500kph, dhankee ayuu Al Mansouri u jeesanayaa marka uu tukanayo?
Waa arrin muran abdan ka dhashay la iskuna khilaafsan yahay. Jawaabtu waxay noqon kartaa buug tilmaame ah oo maamulka arrimaha Islaamka ee Imaaraatka Carabta ay siiyeen Hazza Al Mansouri, si uu u raaco waqtiga magaalada Barakeysan ee Makkah.
“Cirbixiyeennada waxay qoraxda u dhacdaan, una soo baxdaa 16 jeer maalintii, marka uma cadda xilliga ay tukanayaan iyo xilliga ay soomayaan,” ayuu yiri Dr Maxamed Al Axbabi, agaasimaha guud ee laanta cirbixiyeennada dalka isutagga Imaaraatka Carabta.
Cirbixiyeen u dhashay Malaysia, Sheekh Muszapher Shukor, oo u safray saldhigga ISS xilli Ramadaan ay ahayd, sannadkii 2007, ayaa wajahay caqabaddan oo kale.
“Markii Sheekh Muszapher Shukor uu nasoo booqday 2015-kii, wuxuu inooga sheekeynayay siduu shanta salaadood uu xilligooda u tukan jiray isagoo saldhigga hawada sare ku sugan,” ayuu yiri Dr Al Axbabi.
Laanta hawada sare ee Malaysia, Angkasa, waxay isu keentay illaa 150 culimo caan ah ah si ay uga jawaabaan su’aalaha jihada qiblada iyo xilliyada salaadda.
“Wuxuu inoo sheegay in la soo saaray fatwo ah in la raaco xilliga salaadda ee meesha laga dirayo dayax-gacmeedka, taas oo ahayd Kazakhstan.”
Buugga hagaha ah ee hadda la siiyay Al Mansouri wuxuu sheegayaa in uu isku deyo in dhanka dhulka uu u soo foorarsado marka uu tukanayo. Balse haddii ay ku adkaato, uuna ka baqo in salaadda ay dhaafto, wuxuu u jeesan karaa dhinacuu doono”.
Sidoo kale waxaa dhibaato noqon karta in la helo biyo lagu weyseysto.
Buuggan waxaa ku qoran in ISS ay waxyaabaha aasaasiga ah bixiyaan sida biyaha, balse cirbixiyeennada waxaa lagula taliyaa in ay sii qaataan ciid qalalan ama dhagxaan u bedeli kara biyaha oo ay ku gabagabeystaan marka aan biyaha la heli karin.
Waa kuma Hazzaa Al Mansoori?
Hazzaa wuxuu sheegay in shaqadan cirbixiyeenka uu jeclaa xilligii uu yaraa ee uu ku noolaa Abu Dhabi, caasimadda Imaaraatka.
Keliya, laba dal oo Carbeed ayaa horey u tagay Saldhigga Hawada Sare. Waxay kala direen Amiir Sultaan Bin Salmaan Cabdicasiis oo u dhashay Sacuudiga iyo Maxamed Faris oo u dhashay Suuriya. Wuxuuna holwgalkaas dhacay sannadkii 1980-maadkii.
“Tan iyo yaraanteydii waxaan eegi jiray xidigaha,” ayuu yiri isagoo intaa ku daray in u dhowaanshahooda aysan u muuqan wax suuragal noqon kara.
Waxaa sidoo kale dhiirageliyay markii aasaasaha dalka isutagga Imaaraatka Carabta, Sheekh Zayed, kaas oo ku soo caanbaxay kallunkii 1970-maadkii ee Cirbixiyeennadii Mareykanka.
Balse, maadaama ay u muuqatay in uusan jirin Saldhiga uu Imaaraatka ku leeyahay Hawada sare, wuxuu go’aansaday inuu noqdo duuliye.
Markii uu dhammeeyay jaamacadda Duuliyenimada, Hazzaa wuxuu ku biiray ciidammada, wuxuuna u ahaa duuliye diyaarad militari. Wuxuu ku howlgalayay diyaaradaha dagaalka ee F-16.
Waxbadan kuma aysan qaadan in riyadiisii ahayd inuu cirbixiyeen noqdo ay rumowdo.
Safarkan hawada waxaa lagu tilmaamay astaan u wanaagsan Imaaraatka. Qorshayaasha kale waxaa ka mid ah howlgal lagu tago Meeraha Mars, rajaduna waxay tahay in Imaaraatka uu halkaas gaaro 2021-da si loogu maamuusa Aasaaska Imaarada oo 50 sano jirsan doonta.
“Howlgalkan waa guul wayn, aniga iyo dalka Imaaraadka Carabta,” ayuu yiri Hazzaa oo shir jaraa’id qabtay Bishii July.
Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sucuudiga Oo Sheegay inuu qaatay Masuuliyadda Dilka Weriye Jamal Khashoggi loo geystay.
Uhuru Kenyatta: Dhibaatooyinka Afrika waa in loo helaa xal Afrika ka yimaada